Shot nenyunje muchina mhando uye ayo anoshanda minda
Mazuva ano, mabhizinesi anobhadhara zvakanyanya kuwedzera kunaka kwechigadzirwa uye maitiro. Mushure mekupfura nenyunje uye ngura kubviswa pamusoro pechimakanika workpiece, yakanaka yepamusoro mhando inogona kuwanikwa, uye iyo nzvimbo yakachena uye yakanaka mushure mekupenda. Musika wekupfura nenyunje yekuchenesa mac ...
Sponge Media Hasha
Sponge midhiya hasha iboka rehasha midhiya ine urethane chipanje sekunamatira, iyo inosanganisa iko kugona kugona kweiyo urethane chipanje pamwe nekuchenesa uye kucheka simba retsika kuputika midhiya. Zibo TAA Metal ndiyo yega nyanzvi inogadzira chipanje midhiya abrasives ini ...
TAA Carbon Simbi yakatemwa waya - yunifomu inoverengeka saizi, kushanda kwakanyanya, hukuru hwakakwana
Simbi yakatemwa waya, kunyanya mumhando mbiri dzezvimiro-Sekucheka kana kutenderera kutenderera. Sokucheka G1 Yakagadziriswa G2 Yakagadziriswa G3 Yakagadziriswa Simbi yakatemwa waya mhando: Simbi yakatemwa waya inogona kugadzirwa kubva kune itsva simbi waya uye yekare taya waya ese ari maviri. Kazhinji simbi yakatemwa waya yakaitwa ...
Zvishandiso zvemazuva ano uye nekuvandudza - rega michina yako ivandudze
Nekuomarara kwenzvimbo yenyika yekuchengetedza dziviriro uye nezvinodiwa zvehunhu hwehunhu hwehunhu, seye post-yekugadzirisa maitiro, kupfura kupfura kwakabhadharwa zvakanyanya uye zvakanyanya kutariswa nevazhinji mabhizinesi. Kunyangwe iyo perfo ...
TAA simbi isina waya yakatemwa waya yakagadziriswa bara
Stainless simbi yakatemwa waya yakarongedzwa kupfura Simbi isina simbi yakatemwa waya zvakare ziva seasina simbi yakatemwa waya yakarongedzwa kupfurwa, rudzi rweyakajairika maumbirwo akachekwa neepamusoro-soro simbi isina waya. Zvinonzi ainyanya kushandiswa kwepfuti nenyunje, jecha nenyunje, bara peening, kupedza, matte, ngura kubvisa et ...
Yakabudirira mhedzisiro 丨 TAA Metal yakapinda iyo 19th Metal China paShanghai
Tarisa pane chiratidziro Nenzvimbo yakazara ye120000 mativi emamita, vanopfuura 1300 vanozivikanwa varatidziri vanobva munyika zhinji nematunhu vakapinda muchiratidziro chemazuva matatu. Semushanyi akasarudzika wemurongi, TAA Metal atten ...
"Pedyo nevatengi, ramba uchivandudza" | inguva yekuratidza tekinoroji yedu chaiyo
Kuti ushandise kwazvo pfungwa yepamoyo yekambani ye "kutarisa vatengi" uye kushandira vatengi zvirinani, vashandi vebasa reInjiniya Technology Dhipatimendi vachangotanga chirongwa chekushambadzira-chehunyanzvi chePedyo kune vatengi, ramba uchivandudza ...
Chishandiso simbi blade - yakakwira kupfeka kuramba, hupenyu hurefu uye kudhura kuita
Chishandiso simbi ndiyo simbi simbi inoshandiswa kugadzira ekucheka maturusi, kuyera maturusi, kuumbwa uye kupfeka-nemishonga maturusi.Tool simbi ine yakanyanya kuomarara uye inogona kuchengeta yakakwira kuomarara pakakwirira tembiricha, pamwe nepamusoro kusakara kuramba uye kwakakodzera kuomarara.Tool simbi iri genera. ...
Akapfura nenyunje munhuwo muitiro simbi pamusoro kurapwa. Inoshandiswa zvakanyanya mukukanda, simbi, chimiro chebasa, simbi yekugadzirisa zvikamu uye mamwe maindasitiri.Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji uye nekuvandudza kwesimba kwekugadzira, isu tine yepamusoro ...
Simbi ngura iri kwese kwese, nguva dzese Kudzivirira kuita ngura kwesimbi, nzira yakajairika ndeyekushandisa machira kudzivirira pamusoro pezvigadzirwa zvesimbi. Icho chepamusoro chinofanira kucheneswa pamberi pekudzivirira kwekuvhara. Mazana ezvigadzirwa nemaindasitiri anosanganisira ngarava, matangi ekuchengetera, mabhiriji, simbi str ...
Kutarisana nemamiriro ekuwedzera emusika mumaindasitiri akasiyana siyana, makambani akaisa kumberi kunetsa kumitengo yekugadzira uye zvinodiwa nehunhu hwechigadzirwa. Pfuti nenyunje muitiro mukugadzira maitiro chinhu chakakosha chinongedzo chinokanganisa chigadzirwa mutengo ...
A: Zvinhu zvekucheka disc: Kucheka discs kunogona kugoverwa mumhando mbiri: resin yekucheka disc uye dhayamondi yekucheka disc. Inogona kushandiswa zvakanyanya kucheka kwezvinhu zvakajairika zvesimbi, simbi isina simbi & zvisiri-zvesimbi. Pamusoro pezvo, nekuda kwenzvimbo yekushandisa chinhu ...